Nohariana hanao asa tsara isika
"Fa asany isika, voaforona tao amin'i Kristy Jesôsy mba hanao asa tsara, izay namboarin'Andriamanitra rahateo mba handehanantsika eo aminy." - Efes. 2:10.
Azonao atao ny manao asa ho an'i Jesôsy amin'ny fomba izay tsy mbola noeritreretinao hatrizay. Ny Kristianina dia lehilahy sy vehivavy manahaka an'i Kristy, manompo an'Andriamanitra amim-pahavitrihana, manatrika ny fivoriana atao eo amin'ny fiaraha-monina ary ny fanatrehany dia hankahery ny hafa. Tsy asa ny atao hoe fivavahana, saingy ny fivavahana dia miasa fa tsy mitomoe-poana. Loharano madio ny fivavahan'i Kristy, izay ipoiran'ny fangorahana sy ny fitiavana ary ny fahafoizan-tena (...) Raha ny fitiavan'i Kristy no mitoetra ao am-po, dia fiderana Azy sy fanandratana ny Anarany no hipololotra avy eo amin'ny vava. Ho voataona hanao izany ny fanahy izay vonton'ny fitiavan'i Kristy (...)
Tsy maintsy maneho ny zanakalahy sy zanakavavin'Andriamanitra fa izy ireo dia olom-boafidin'ny lanitra. Ny olona manana ny maha-izy azy eo imason'Andriamanitra dia ny olona izay mitandro ny fanahiny ho madio tsy voapentin'ny fahalotoan'izao tontolo izao na dia eo anivon'ny savorovoro sy ny olana ary ny fahasahiranana ara-bola aza. Hijoro tsy ho voahozongozona amin'ny fahaleovan-tena ara-môraly ny fanahy izay miantehitra tsara amin'Andriamanitra amin'ny alalan'ny vavaka sy ny finoana, kanefa ho hita eo aminy koa ny halemem-panahy sy fitiavana ary hatsaram-panahy tanteraka. Hatrehinao sy hotoherinao ny fakam-panahin'ny fiaraha-monina, ho voahazonao ny fifandraisana ety amin'Andriamanitra, ary ny fifandraisan' ny fanahinao amin'Andriamanitra hahatonga anao ho afaka hampita, amin'ny alalan'ny fifandraisana amin'ny hafa, ny fitahiana miavaka izay narotsaky ny lanitra taminao (...) Ho hita eo amin'ny asa ataony rehetra ny fahamarinana tsy manavakavaka, kanefa tsy mijanona hatreo ny adidiny. Mitaky zavatra ambonin'izany Andriamanitra. Takin'Andriamanitra aminao ny hitiavanao ny hafa tahaka ny nitiavan'i Kristy azy ireo. Takiny aminao ny hangorahanao ireo izay mijaly sy maniasia ary ireo izay ianjadian'ny fakam-panahin'i Satana. Takiny aminao ny hanehoanao halemem-panahy sy fanajana na dia amin'ireo izay tsy maneho izany aza, sy ny hitsinjovanao ny fahatsapana ao anatin'ny hafa (...) Tsy maintsy kajinao ny zavatra ataonao eo amin'izao tontolo izao mba hihazonanao mandrakariva ny fahatonianao sy ny fiadanana ao anatinao mba hamelanao ohatra ny amin'ny toe-panahy araka an'Andriamanitra. - L, t.7, 1883.